လံာ်ကွဲးနီၣ်တၢ်အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ် ၁ (1 Chronicles 1)
၁၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀
၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄၂၅ ၂၆၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀
၁-၂စီၤအၤဒၣ်, စီၤရှ့သး, စီၤအနိၣ်,- စီၤက့ၤနၣ်, စီၤမၤ ဟလၤလ့လး, စီၤယၤရ့း, ၃ စီၤဃနိာ်, စီၤမသူၤၡလၤ, စီၤလ့ၤမ့း, ၄ စီၤနိအၤ,စီၤရှ့ၣ်,စီၤဃၣ်,ဒီးစီၤယ့ဖ့းသးလီၤ.
၅ ဒီးစီၤယ့ဖ့သးအဖိခွါမ့ၢ် စီၤကိမၢၤ, ဒီးစီၤမကိး, ဒီးစီၤမၤဒဲ, ဒီးစီၤယၤဝၣ်, ဒီးစီၤတူၤဘလး, ဒီးစီၤမ့ၤရှ့း, ဒီးစီၤ တံၤရ့းလီၤ. ၆ ဒီးစီၤကိမၢၤအဖိခွါမ့ၢ်စီၤအၤၡကံနး, ဒီးစီၤ ရံဖသး, ဒီးစီၤတိကးရမၤလီၤ. ၇ ဒီးစီၤယၤဝၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤအလံၡၤ, ဒီးစီၤတၢ်ၡံၣ်, စီၤကံးတံၣ်, ဒီးစီၤဒိဒၤနံၣ်လီၤ.
၈ ဒီးစီၤဃၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤကူၤၡး, ဒီးစီၤမံးစရၤယံၣ်, စီၤ ဖူး,ဒီးစီၤကနၤဧၣ်လီၤ. ၉ ဒီးစီၤကူၤၡးအဖိခွါမ့ၢ်စီၤစဘၤ,ဒီးစီၤဃဝံၤလၤ, ဒီးစီၤစၤဘတၤ, ဒီးစီၤရၤဧမၤ, ဒီးစီၤစၤဘတံကၤလီၤ. ဒီးစီၤရၤဧမၤအဖိခွါမ့ၢ်စီၤၡဘၤ, ဒီးစီၤဒ ဒၣ်လီၤ. ၁၀ ဒီးစီၤကူၤၡးထီၣ်ဖိစီၤနံးမရိးလီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ်ကဲ သီပှၤအဒိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ. ၁၁ ဒီးစီၤမံးစရၤယံၣ်ထီၣ်ဖိစီၤလူဒံၣ်, ဒီးစီၤဧနၤမံၣ်, ဒီးစီၤလဟါဘံၣ်, ဒီးစီၤနၤဖထူ ဃံၣ်, ၁၂ ဒီးစီၤပသြုစံၣ်, ဒီးစီၤကၤစလူဃံၣ်, *ပှၤဖလ့ၡသး ဖိလီၤစၢၤလၢအီၤ, ဒီးစီၤကၤပတိရံၣ်လီၤ. ၁၃ ဒီးစီၤကနၤ ဧၣ်ထီၣ်ဖိစီၤစံဒိၣ်အဝဲၢ်ကိတဂၤ, ဒီးစီၤဃ့ၤသး, ၁၄ ဒီးယ ဘူၣ်ဖိ,ဒီးအမိၢ်ဖိ,ဒီးကံၢ်ကၣ်ဖိ, ၁၅ ဒီးဃံၤဝံၤဖိ,ဒီးဧၤရကၤ
၁၆ ဖိ, ဒီးစံၣ်ဖိ, ဒီးအၢ်ဝးဖိ, ဒီးစမၢ်ဖိ, ဒီးဃမါသးဖိ လီၤ. ၁၇ ဒီးစီၤရှ့ၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဧ့ၤလၣ်, ဒီးစီၤအၤရှူၢ်, ဒီးစီၤအၢ်ဖးၡးဒီးစီၤလူး, ဒီးစီၤအရၣ်, ဒီးစီၤဧူးစး, ဒီးစီၤဃူလး, ဒီးစီၤက့သၢ်, ဒီးစီၤမ့ၤရှ့းလီၤ. ၁၈ ဒီးစီၤအၢ်ဖးၡးထီၣ်ဖိစီၤ စ့ၤလါ, ဒီးစီၤစ့ၤလါထီၣ်ဖိစီၤဧ့ၤဘ့ၢ်, ၁၉ ဒီးစီၤဧ့ၤဘ့ၢ်ထီၣ်ဖိအဖိခွါခံဂၤလီၤ. အဝဲတဂၤအမံၤမ့ၢ်စီၤပ့ၤလ့းလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢအဝဲတဂၤအစိၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤမုၢ်လီၤဖး လီၤ. ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်အမံၤမ့ၢ်စီၤယးကတၣ်လီၤ. ၂၀ ဒီးစီၤယးကတၣ်ထီၣ်ဖိစီၤအၤလမိဒး, ဒီးစီၤရှ့လဖး, ဒီးစီၤဃၤစရ မၤဝ့း, ဒီးစီၤယၤရၢ်, ၂၁ ဒီးစီၤဟဒိၣ်ရၣ်, ဒီးစီၤအူစလး, ဒီး စီၤဒံးကလး, ၂၂ ဒီးစီၤဧ့ဘလး, ဒီးစီၤအဘံမအ့လး, ဒီးစီၤ ၡၤဘၤ, ၂၃ ဒီးစီၤအိဖ့ၢ်, ဒီးစီၤဃဝံၤလၤ, ဒီးစီၤယိတာ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်စီၤယးကတၣ်အဖိခွါလီၤ.စီၤရှ့ၣ်, စီၤအၢ်ဖးၡး, စီၤစ့ၤလါ, ၂၄-၂၅ စီၤဧ့ၤဘ့ၢ်, စီၤပ့ၤ ၂၆-၂၇လ့း,စီၤရူၤ,-စီၤစရူာ်,စီၤနၤဃိၢ်, ဒီးစီၤတ့ရၤ,-စီၤအၤ ဘြၤ *အဝဲန့ၣ်မ့ၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်လီၤ. ၂၈ စီၤအၤဘြၤဟၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤအံၤစဲး, ဒီးယံးၡမၤဧ့လးလီၤ.
၂၉ အအံၤမ့ၢ်အစၢၤအသွဲၣ်.စီၤယံးၡမၤဧ့လးအဖိခွါအဝဲၢ်ကိစီၤနဘါယိး, ဒီးစီၤက့ ဒၢ်, ဒီးစီၤအးဒဘလး, ဒီးစီၤမံးဘစၣ်, ၃၀ ဒီးစီၤမံးၡၤမၤ,ဒီး စီၤဒူမၤ,စီၤမၤစၤ, ဒီးစီၤဃဒၢ်, ဒီးစီၤတ့မၤ, ၃၁ ဒီးစီၤယတူၢ်,ဒီးစီၤနါဖံၢ်, ဒီးစီၤက့ဒမၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စီၤယံးၡမၤဧ့လးအဖိခွါလီၤ.
၃၂ ဒီးအအံၤမ့ၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်အသံၣ်မါ နီၢ်ကတူရၤအဖိခွါတဖၣ်, ဆံးစၢ်န့ၢ်ဝဲလၢစီၤစံးမရၣ်, ဒီးစီၤယးကၡၣ်,ဒီးစီၤမဒၣ်, ဒီးစီၤမံးဒယၣ်, ဒီးစီၤယံးၡတး, ဒီးစီၤရှူာ်လီၤ. ဒီးစီၤယးကၡၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤၡဘၤ, ဒီးစီၤဒဒၣ်လီၤ. ၃၃ ဒီးစီၤမံးဒယၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဧ့ၤဖၣ်, ဒီးစီၤဧ့ၤဖ့ၢ်, ဒီးစီၤဃနိာ်,ဒီးစီၤအဘံဒၤ, ဒီးစီၤအ့ၤလဒါဧၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်နီၢ်ကတူရၤအဖိခွါလီၤ.
၃၄ ဒီးစီၤအၤဘြၤဟၣ်ထီၣ်ဖိစီၤအံၤစဲးလီၤ. စီၤအံၤစဲးအဖိ ဖိခွါမ့ၢ်စီၤဧ့ၡီၤ, ဒီးစီၤအံၣ်စရ့လးလီၤ. ၃၅ ဒီးစီၤဧ့ၡီၤအဖိခွါမ့ၢ်စီၤအလံဖးစး, စီၤရဧူၤအ့လး, ဒီးစီၤယၤဧူၡးဒီးစီၤယၤ ဧလၤ, ဒီးစီၤကိၤရးလီၤ. ၃၆ ဒီးစီၤအလံဖးစးအဖိခွါမ့ၢ်စီၤတ့ၤမၣ်ဒီးစီၤအိမၢ်, စီၤစဖိၤဒီးစီၤကၤတၣ်, စီၤကနးစး ဒီးစီၤတံးမနၤ, ဒီးစီၤဧမၤလ့းလီၤ. ၃၇ ဒီးစီၤရဧူၤအ့လးအ ဖိခွါမ့ၢ်စီၤနၤဃး, စီၤစ့ရၤ, စီၤၡးမၤ, ဒီးစီၤမံစၤလီၤ. ၃၈ ဒီးစီၤစံဧၢ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤလိတၣ်, ဒီးစီၤၡိဘလး, ဒီးစီၤစံးဘဧိၣ်, ဒီးစီၤဧနၤ, ဒီးစီၤဒံၡိၣ်, ဒီးစီၤအ့စၢ်, ဒီးစီၤဒံၡၣ်လီၤ.-
၃၉ ဒီးစီၤလိတၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဃိၢ်ရံၤ, ဒီးစီၤဟ့မၣ်, ဒီးစီၤလိ တၣ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ပိာ်မုၣ်နီၢ်တံးမနၤလီၤ. ၄၀ ဒီးစီၤၡိဘလးအဖိခွါမ့ၢ်စီၤဧးကဝၣ်, ဒီးစီၤမနၤဃး, ဒီးစီၤဧ့ၤဘါလး, စီၤၡဖိၤ, ဒီးစီၤအိၤနၣ်လီၤ. ဒီးစီၤစံးဘဧိၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤအၣ် ယၤ, ဒီးစီၤဧနၤလီၤ. ၄၁ ဒီးစီၤဧနၤအဖိခွါမ့ၢ်စီၤဒံၡိၣ်လီၤ.ဒီးစီၤဒံၡိၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဃ့းမဒၣ်, ဒီးစီၤအ့းၡဘၣ်, ဒီးစီၤ ယံးသရၣ်, ဒီးစီၤကရၣ်လီၤ. ၄၂ ဒီးစီၤအ့စၢ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဘံးလဟၣ်, ဒီးစီၤစၤဧဝၣ်, ဒီးစီၤယၤဧကၣ်လီၤ. ဒီးစီၤဒံၡၣ်အဖိခွါမ့ၢ်စီၤဧူးစး, ဒီးစီၤအၤရၣ်လီၤ.
၄၃ ဒီးအအံၤမ့ၢ်စီၤပၤလၢအကဲစီၤပၤ လၢကီၢ်အဒိၣ်အပူၤလၢစီၤပၤတချုးကဲဒံးဘၣ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဖီခိၣ်လီၤ. စီၤဘဧိၢ်အဖိခွါစီၤဘ့လၤ, ဒီးအဝ့ၢ်အမံၤမ့ၢ်ဒံးနဟး ဘၤလီၤ. ၄၄ ဒီးစီၤဘ့လၤသံဝဲ, ဒီးစီၤစ့ရၤအဖိခွါဘၣ်ဃး ဒီးဝ့ၢ်ဘိးစရၤ, စီၤယိဘးကဲစီၤပၤလၢအလီၢ်လီၤ. ၄၅ ဒီးစီၤယိဘးသံဝဲ, ဒီးစီၤဃူၡၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်တ့ၤမၣ်ကဲစီၤပၤ လၢအလီၢ်လီၤ. ၄၆ ဒီးစီၤဃူၡၣ်သံဝဲ, ဒီးစီၤဘဒးအဖိခွါ *လၢအကျီသံကွံာ်မံးဒယၣ်လၢ တၢ်ပျီပူၤမိၤအးအပူၤစီၤဟးဒးကဲစီၤပၤလၢအလီၢ်, ဒီးအဝ့ၢ်အမံၤမ့ၢ်ဧဝံးလီၤ.-
၄၇ ဒီးစီၤဟးဒးသံဝဲ, ဒီးစီၤစးမလၤဘၣ်ဃးဒီးမးစရ့ကၤကဲ စီၤပၤလၢအလီၢ်လီၤ. ၄၈ ဒီးစီၤစးမလၤသံဝဲ, ဒီးစီၤစီလူးဘၣ်ဃးဒီးဝ့ၢ်ရဃိဘိးလၢထံမိၢ်ပှၢ်အနံၤန့ၣ် ကဲစီၤပၤလၢ အလီၢ်လီၤ. ၄၉ ဒီးစီၤစီလူးသံဝဲ, ဒီးစီၤဧးကဘိၢ်အဖိခွါစီၤ ဘဧၤလဃါနၣ်ကဲစီၤပၤလၢအလီၢ်လီၤ. ၅၀ ဒီးစီၤဘဧၤလဃါနၣ်သံဝဲ, ဒီးစီၤဃဒၢ်ကဲစီၤပၤလၢအလီၢ်လီၤ. ဒီးအဝ့ၢ်အမံၤမ့ၢ်ဖၤဧံၤ, ဒီးအမါအမံၤမ့ၢ်နီၢ်မဟ့တးဘအ့လး, နီၢ်မးတရ့းအဖိမုၣ်, စီၤမ့စဟးအဖိမုၣ်လီၤ. ၅၁ ဒီးစီၤဃဒၢ်သံဝဲလီၤ. ဒီးအဒိၣ်အစကီၤတဖၣ်မ့ၢ်စကီၤတံးမနၤ, စ ကီၤဧးကဝၣ်, စကီၤယသ့း, ၅၂ စကီၤအဟိးလံးဘါမၤ, စ ကီၤအ့လး, စကီၤပံနိၣ်, ၅၃ စကီၤကနးစး, စကီၤတ့ၤမၣ်, စကီၤမံးဘစၢ်, ၅၄ စကီၤမးကဒံးအ့လး, စကီၤဧံရၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အဒိၣ်အစကီၤတဖၣ်လီၤ.